Mwanasikana wangu arikuda kuzora makeup, kwave kukasika here? | Bezzia
Mwanasikana wangu arikuda kuzora makeup, kwave kukasika here?
Tony Torres | 12/01/2022 20:00 | Mazano amai
Nhanho imwe neimwe yehupenyu hwevana yakasiyana, yakakosha uye pamusoro pezvose, yakasimba. Kukura kwevana kwakasiyana kune mumwe nemumwe wavo, zvisinei, matambudziko uye nguva dzinoshungurudza dzinouya kune vese. Kunyanya apo kuyaruka kunosvika, nevakawanda hormonal disorders uye kuchinja kweunhu hwevana, izvo zvinoita kuti vabereki vasanyatsoziva kuti vangazviita sei.
Kuita zvisarudzo panyaya yevachiri kuyaruka kwakaoma, nokuti neimwe nzira vanoita sevakura, asi chaizvoizvo vachiri vana. Vana vari kukudziridza hunhu hwavo, zvavanofarira uye zvavanofarira izvo nhasi inogadziriswa neruzivo rwese rwavanowana kubva paInternet. Uye ndipo apo vana vanowana nyika dzinonakidza uye dzine nharo senyika yekugadzira.
1 Mwanasikana wangu anoda kuzora makeup asi ndinofunga kuti kuseni
1.1 Mudzidzise kuzora makeup
Mwanasikana wangu anoda kuzora makeup asi ndinofunga kuti kuseni
Vasikana nevakomana vakawanda vanoda zvekupoda-poda, sezvo vari vana uye vachinakidzwa nokutevedzera zvinoitwa nevakuru kana kutamba zvipfeko. Kupoda-poda mutambo kwavari uye kunyangwe zvakadaro, harisi dambudziko kuvabereki. Zvisinei, Chii chinoitika kana musikana ari kuyaruka akati anoda kuzora? Chii chave chiri chimiro chevakuru, kubuda, kuenda kuchikoro kana kupedza nguva neshamwari.
Panguva iyoyo, chinhu chakajairika ndechekuti une hunhu hwekuzviramba, kufunga kuti achiri mudiki uye wozvitaura pamberi pake. Chimwe chinhu chinogona kuitika pasina mubvunzo kune chero munhu, kunyangwe kuchiri kukanganisa. Nokuti kana mwana akataura zvaanoda kwauri, anokuita kuti uone zvakaita hunhu hwake, anovhura pamberi pako, ari kuita chiitiko mukuvimba chinogona kuputswa zvisingaite.
Nokudaro, kana uchigamuchira nhau dzakadai, chinhu chekutanga uye chinonyanya kukosha ndechekuchengetedza kutonga uye kunyatsofunga kuti ungaita sei. Rega kutaura zvinogumbura musikana, usamuudza kuti musikana kana kuti mukuru, nekuti zvinonyanya kuitika ndezvekuti pane zvimwe zvinhu unomuudza kuti haasisiri musikana. Teerera kune zvavanoda, mukumbire kuti akuudze kuti anoda makeup rudziiMuudze kuti muchafunga nezvazvo mozokurukura pane imwe nguva.
Mudzidzise kuzora makeup
Kana mwanasikana wako achida kugadzira makeup, achazviita, iwe kana kuti usingafariri. Musiyano ndewekuti kana ukazviita nemvumo yako, uchazviita nemazvo, nezvigadzirwa zvakakodzera uye zvishoma nezvishoma kudzidza kuti makeup chii. Kana ukazviita nekunyengedza, uchafanirwa kushandisa zvigadzirwa zvakachipa, zvekukwereta kana zvisina kunaka. Haazoziva kuti ozvizora sei, kana kuti makeup inomubatsira kuti ataridzike zviri nani, nekuti ndizvo zvinorehwa necosmetics.
Nguva iyoyo inofanira kuuya, nokuti kana mwanasikana wako akaratidza chido chake chekuzora, nokukurumidza kana kuti gare gare ichauya. Saka, mubatsire kuwana nyika inosetsa ye cheno, sei inonakidza uye inogona kudzidza zvinhu zvakawanda wepa. Tora mwanasikana wako kunotenga zvigadzirwa zvake zvekutanga, nekuti zvakakosha kuti ashandise zvizoro zvinoenderana nezera.
Sarudza zvimwe zvinhu zvakakosha izvo mwanasikana wako achafara nazvo, pasina chikonzero chekushandisa marudzi ese ezvigadzirwa. Unogona kumutengera moisturizer ine rumwe ruvara, cream yakanyanyisa mvura ine sun protection factor inodzivirirawo ganda rake. Lipstick yepink tones, iyo yaunoona nayo rumwe ruvara pamiromo yako asi nenzira yakapusa. anogonawo shandisa imwe inzwi repasi kana peach mumvuri pameso, chigadzirwa chichakubatsirawo kupendesa matama ako.
Nezvigadziro izvi mwanasikana wako anogona kutanga bhegi rake rekuzora. Uye iwe, uchava nerunyararo rwepfungwa rwekuziva izvozvo shandisa zvigadzirwa zvavo, izvo zvemhando yepamusoro, zvinoenderana nezera ravo uye namavara asingazoiti kuti aratidzike seakura kana kuti akavanzika. Nenzira iyi, achafara, achanzwa anzwiwa, anonzwisiswa, uye kana achida kutaura newe, kuvimba kunokosha kuchave kwagadzirwa. Chimwe chinhu pasina mubvunzo chakakodzera, kunyange nekuda kweizvi zvakakosha kurega mwanasikana wako achizora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mazano amai » Mwanasikana wangu arikuda kuzora makeup, kwave kukasika here?
Vaviri vanorarama sei nedambudziko rakakonzerwa nokusvika kwomwana wavo wokutanga
Tora mukana wekutengesa kwePikolinos, mari mukunyaradza